Aiza isika Espaniola no mandeha matetika? | Vaovao momba ny dia
Aiza isika Espaniola no mandeha matetika?
Carmen Guillen | | New York, Tenerife
Araka ny laharana navoakan'ny tranonkalan'ny hanao kayak Mikasika ireo fikarohana any amin'ny toerana itadiavana izay kintana espaniola indrindra, dia izao no valiny:
Raha ny amin'ny toeran-tany iraisam-pirenena, ny mpandresy amin'ny fikarohana lehibe dia antenaina: mazava ho azy New York. Narahina ilay goavambe amerikana London, Roma, Paris y Bangkok.
Etsy ankilany, inona no manondro fikarohana any amin'ny firenena, mandresy ny lalao ireo nosy: amin'ny fitarihana Santa Cruz de Tenerifearahin'ny Ibiza, Barcelona, ​​Madrid y Menorca. Ary ianao, aiza no tianao halehanao amin'ny faran'ny herinandro na fialantsasatra faran'ny herinandro manaraka?
1 Fa maninona i New York no manintona antsika?
2 Santa Cruz de Tenerife, ilay toerana tian'ny maro
Fa maninona i New York no manintona antsika?
Na eo aza ny vola be tsy maintsy angonina, na amin'ny teny hafa, mba hitsimbinana hahafahana miampita ilay dobo lehibe sy mandeha any New York, dia mbola eo amin'ny Espaniola ihany io, araka ny hitantsika, ny toerana iraisampirenena tian'ilay maro an'isa. Fa nahoana? Inona no misarika ny saintsika betsaka momba ilay tanàna malaza any Amerika? Mety ho ny sasany amin'ireto antony:
Tianay ny tranobe avo. Tsy fantatsika raha noho izy ireo mihevitra azy ireo ho sarotra ara-batana, tianay ny mijery sy mahita trano avo be manodidina antsika. Angamba satria any Espana dia tsy dia be dia be izy ireo, afa-tsy amin'ny tanàn-dehibe, mazava ho azy.
Ho an'ny goavambe Central Park. Ao afovoan-tanàna isika dia afaka mahita ity valan-javaboary tsy latsaky ny 3,4 kilometatra toradroa ity ary miaraka amin'ny 90 kilometatra ahafahantsika mandeha amin'ny arabe. Ao no ahitantsika ny faritra maintso tsy misy farany mankany amin'ny farihy midadasika izay ahafahantsika manatanteraka karazana hetsika rehetra. Any dia mahazatra ny mahita olona marobe ao New York sy mpizahatany izay manao spaoro rehetra: mihazakazaka, baseball (misy kianja voaomana amin'ity fanatanjahantena amerikana malaza ity), sns.
Ny toerana mety indrindra ho an'ireo izay tia miantsena (ary manana vola amin'izany izy ireo, mazava ho azy). Misy fivarotana any izay ahitantsika ny vokatr'izy ireo mora vidy kokoa noho ny any Espana. Ny marika toa Nike, Calvin Klein, Converse, an'i Levi Izy ireo dia mora vidy kokoa noho ny eto amin'ny firenentsika ary indrindra raha mahita azy ireo any amin'ireo 'outlet' malaza ianao izay saika misy fihenam-bidy mahafinaritra foana.
Ho an'ny sakafon'izy ireo! Any Amerika, tsy ny zava-drehetra ve no sakafo junk sy sakafo ratsy, sa tsy izany? Fa ny marina dia aiza no tsara kokoa hihinananaana hamburger toy izay amina fivarotana amoron-dalana ao afovoan'i New York? Misy zavatra amerikanina hafa noho io ve?
Ireo dia efatra fotsiny amin'ireo antony maro azonay nanolorana anao handeha ho any New York, raha mbola mila resy lahatra amin'izany ianao (ianao dia ho iray amin'ireo Espaniola vitsivitsy izay tsy manonofy ny ho any), fa raha iray amin'ireo teratany mieritreritra fa tsara kokoa ny mahalala ireo toerana any Espana ireo, mbola tsy notsidihina, alohan'ny handehanany any ivelany, eto ambany izahay manome anao antony hitsangatsanganana any Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife, ilay toerana tian'ny maro
Tsy gaga izahay mahita fa i Santa Cruz de Tenerife no toeran-kaleha nofinidin'ny ankamaroan'ny Espaniôla izay mitady handeha any amin'ny toerana misy ny firenena tsy vanim-potoana. Ity Nosy ity dia manana hatsarana be ary raha mbola tsy fantatrao izay azony omena anao, dia lazainay aminao izao:
Tsidiho ny Museum ny natiora sy ny olombelona.
Mandehana any Tranombakoky ny tantara miaramila any Nosy Canary.
Jereo ny Boribory amin'ny zavakanto kanto avy any Tenerife.
Mandehana mamakivaky ny lehibe Plaza de España na avy amin'ny Rambla de Santa Cruz.
Mandehana mitsangatsangana amin'ny lalan'ny Ala Enchantedna, amin'ny hatsarana mahatalanjona. Voafetra ho an'ny mpitsidika ihany izy io amin'izao fotoana izao, noho ny fahasimbana dia nijaly izy.
Mandehana any Tsena monisipaly Tompovavin'i Afrika.
Milalaova fanatanjahan-tena toy ny antsitrika sa ny 'snorkel' amin'ny morony mahafinaritra maro.
Ary miresaka momba ny morontsiraka, tsidiho, ohatra, ny Morontsiraka Las Gaviotas na torapasika Las Teresitas, samy fantatry ny besinimaro sy mpizaha tany matetika ny mponin'ny nosy.
Ary izao satria efa antomotra ny daty, ankafizo ny fampisehoana an'ity malaza manerantany ity Karnavaly Tenerife.
Ary ankehitriny, mazava aminao ve ny antony itadiavantsika fitsangatsanganana any New York sy Santa Cruz de Tenerife? Sa mbola mila antony bebe kokoa ianao? Tsidiho izy ireo dia ho hitanao ireo rehetra izay tsy ampahafantarinay eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » New York » Aiza isika Espaniola no mandeha matetika?
Ny hamburger ve no tena zavatra amerikana indrindra? Azafady, toa mahazatra anao ve i Hamburg? Any Alemana izy io ary avy any no misy ny hamburger toa ireo alika mafana (Hotdogs) avy any Frankfurt ihany koa any Alemana, ny Amerikanina dia nanafatra sakafo eropeana maro nandritra ny namakivaky an'i Eropa nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, anisan'izany ireo pizza avy any Italia, ny zavatra amerikana hitanao indrindra dia avy any Alemana. Tsy mahay ianao ary mahazo vola amin'izany.
Ry namana Oscar. Ny hamburger dia noforonin'ny mpahandro avy any Hamburg izay nipetraka tany Etazonia tamin'izany fotoana izany. Midika izany fa tany no namoronany azy. Ka ho ahy dia amerikanina toa alemà izy. Ary izany farafaharatsiny no fantatra hatreto.
Toerana 5 fitsidihana any Espana amin'ity 2017 ity
Zavatra hita ao amin'ny faritanin'i Pontevedra (II)